Kooxda Elman oo tijaabada caafimaad marsiisay xiddig u dhashay dalka Ghana… + SAWIRRO – Gool FM
(Muqdisho) 29 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta Elman ayaa la soo saxiixatay ciyaaryahan u dhashay dalka Ghana kaas oo ka ciyaara booska weerarka.
Suuqa kala iibsiga horyaalka Somali Premier League ayaa daaha laga rogay, iyadoo kooxaha horyaalka ay baadi goob ugu jiraan inay keensadaan xiddigo ku filan kooxdooda, maadama dhaawan uu furmi doono wajiga labaad ee horyaalka Soomaaliya.
Naadiga Elman ayaa la soo wareegtay xiddiga lagu magacaabo Issah Ibrahim kaasoo u dhashay dalka Ghana, waxayna kala soo saxiixdeen kooxda STK Stars taas oo ka dhisan dalkiisa hooyo.
Xiddigan weerarka ka ciyaara ayaa tijaabada caafimaad ku baasay, balse wali kooxda Elman ma aysan shaacin qandaraaska uu qalin ugu duugay laacibkan cusub.
Saacadaha soo aaddan ayey ku dhawaaqi doonta kooxda Elman heshiiska ay la gaartay laacibka u dhashay dalka Ghana ee Issah Ibrahim, kaas oo ka soo muuqan doona wajiga labaad ee horyaalka Somali Premier League.
Si kastaba ha noqotee, kooxda Elman ayaa ku jirta booska labaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League, iyadoo leh 18-dhibcood, waxaana hoggaanka looga haya 2-dhibcood oo qura.